ခက်ဦး – အညံ့စားရုပ်ရှင် | MoeMaKa Burmese News & Media
ဘုန်းနေသွန်း ● မိုးမိတ်​
Thet Khine - နှိုင်းရဲရမယ်
ခက်ဦး – အညံ့စားရုပ်ရှင်
(မိုးမခ) မတ် ၁၇၊ ၂၀၁၇
၁၅ . ၃ . ၂၀၁၇